Interview with Ko Zin Lin Htet (GM of Real Fitness) - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
Interview with Ko Zin Lin Htet (GM of Real Fitness)
October 29, 2019 | by Real Fitness
ယခုအပတ်မှာတော့ Real Fitness ရဲ့ General Manager Ko Zin Lin Htet နဲ့ အင်တာဗျူးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Ko Zin Lin Htet
Interview Date: Oct 29, 2019
“ GYM ကို အားကစားတခုလိုမျိုး အားမှလာကစားရတဲ့ နေရာတခုလို့ မသက်မှတ်ပဲ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အမြဲတမ်းကစားသင့်ဆော့တဲ့နေရာတခုလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ”
ကျွန်တော်ကတော့ Real Fitness က General Manager ကိုဇင်လင်းထက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ GYM ကို တည်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးနဲ့ ဖွင့်ခဲ့တာ ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Real Fitness ကို ကျွန်တော်တို့ 2012 ခုနှစ်မှ Golden Valley ရွှေတောင်ကြားမှာ ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Real ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက Fitness လောကမှာ Fitness ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကို အစစ်အမှန်ပေးစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ဆိုတဲ့ နာမည်လေးကို ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ Golden Valley ကို 2012 ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ စဖွင့်ခဲ့တယ်။ 2014 ခုနှစ်မှာ Real Mindhama ကို စဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ Novotal မှာဖွင့်တယ်။ ပြီးတော့ Sedona နားမှာဖွင့်တယ်။ အခုနောက်ဆုံးကတော့ Real Express ဆိုပြီး မြို့ထဲ G Hotel မှာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့ လက်ရှိပေါင်း Real Fitness အနေနဲ့ Class 5ခုရှိပါတယ်။
လက်ရှိ Member တွေရော တော်တော် များနေပြီလား?
ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ကို အခု Member 2000 ကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ Real Fitness7နစ် တိုင်တိုင် ရပ်တည်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ အခု Member တွေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့7နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ GYM ကို Join မယ်ဆို အသင်းဝင်ကြေး၊ လစဉ်ကြေးနဲ့ နှစ်စဉ်ကြေးက ဘယ်လောက်ရှိလဲ?
Real Fitness ရဲ့ အားသာချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ Class တွေအကုန်လုံးက သူ့ရဲ့ Range Price Range နဲ့ သူပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံကနေစ‌ပြောရရင် Real Express ဟာဆိုရင်5သောင်းကျော်ကနေစလို့ ကျွန်တော်တို့ GYM ဆော့နိုင်တယ်။ အဲ့တော့ သူ့ထက်နည်းနည်းလေး မြင့်သွားမယ်ဆိုလို့ိရင် ကျွန်တော်တို့ Real Golden Valley, Real Mindhama ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Premier2ဆင့် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ $70, $80$ နဲ့ ဆော့နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ့ထက်မြင့်တဲ့ Exclusive Class ကို ကျွန်တော်တို့ Sedona မှာ ဖွင့်ထားပါတယ်။
အစ်ကို GYM မှာ ဘယ်လို Service တွေပေးလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ Real Fitness GYM5ခုကို ကျွန်တော်တို့စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ အချိန်ကနေစပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ GYM ကိုအမျိုးစားမတူအောင် ကျွန်တော်တို့သေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငွေကြေးအတက်နိုင်ဆုံး အနည်းဆုံး Membership ကြေးကစလို့ သူ့ရဲ့ Private နဲ့အတူ သူရတဲ့ Facilities လေးနည်းနည်းလေး ကွာပြီး ကျွန်တော်တို့ Service ကတော့ အားလုံးတူတူပါပဲ။ GYM Facilities ပိုင်းလေးမှ စက်ပစ္စည်းပိုင်းလေးမှာ Swimming Pool ပါတဲ့ ပိုင်းလေးမှာ နည်းနည်းလေးကွာပြီး ကျွန်တော်တို့ Price ကို အတက်နိုင်ဆုံး အခြေခံကနေစလို့ အမြင့်ဆုံးထိ Price Range တွေ လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ကိုယ်က Basic လောက်ပဲ Basic Facility လောက်ပဲ ဆော့ချင်တယ် ကိုယ်က GYM ဆော့တာလောက်ပဲ ဝါသနာပါတယ် အဲ့လောက်ဆိုရင်5သောင်း ကျော်လေးနဲ့ ့ထဲက G Hotel မှာ Real Express မှာ ဆော့လို့ရပါတယ်။ သူ့ထက်နည်းနည်းလေး အဆင့်မြင့်သွားတယ်ဆိုရင် GYM Stand Class ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Real Golden Valley, Real Mindhama အဲ့ Class တွေမှာ ဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ Premium အဆင့် Standard အတွက်ပေါ့နော်။ အဲ့မှာ ဆော့လို့ရပါတယ်။ Exclusive Class တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ Real Signature Sedona နဲ့ Novotal Effect Fitness မှာ ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရပါတယ်။ Novotal Effect Fitness နဲ့ Real Signature Sedona ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Swimming Pool, Tennis ဒီလို Facility တွေအများကြီးပါတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးပေါ်စက်တွေနဲ့ အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ Service ပေးနေပါတယ်။
GYM ဘာကြောင့် ကစားသင့်လဲ၊ သွားသင့်လဲဆိုတဲ့ Motivation စကားလေးပြောပေးပါဦး?
ကျွန်တော်တို့ Real Fitness အနေနဲ့ အကြံပြုချင်တာက GYM ကို အားကစားတခုလိုမျိုး အားမှလာကစားရတဲ့ နေရာတခုလို့ မသတ်မှတ်ပဲ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အမြဲတမ်းကစားသင့်ဆော့တဲ့ နေရာတခုလို့ အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်း GYM ဆော့လို့ရပါတယ်။ အိမ်မှာလဲ စက်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပြီး GYM ဆော့လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာဆော့တဲ့ပုံနဲ့ GYM မှာဆော့တဲ့ ပုံစံလုံးဝမတူပါဘူး။ Motivation မတူဘူး။ Environment မတူဘူး။ ကျွန်တော်တို့ GYM မှာ GYM ပစ္စည်းတွေအပြင်ကိုမှ တခြားထူးခြားတဲ့ Program လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Class တိုင်းမှာ Studio ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ Yoga Class တွေရှိတယ်။ Zumba ရှိတယ်။ Body Compus, Body Pump, Body Balance, Stuff, Aerobic, ထူးခြားတဲ့ Program နဲ့ အများကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Stress တွေ သိပ်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် GYM ကိုလာပြီးတော့ GYM ဆော့တယ်။ ဝိတ်တွေ မမချင်ဘူး။ ပြေးစက်တွေပေါ်မှာ မပြေးချင်ဘူးဆိုလဲ ကျွန်တော်တို့အပျော်သဘောလေးနဲ့ Zumba လေး ကနေရင်းနဲ့ Yoga လေးလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ Body ဝိတ်အတတ်အကျ ဒါတွေအကုန်လုံးကို လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ GYM ဆော့တာ ဘာကြောင်းလဲလို့ပြောရင် အဓိကကတော့ ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တာကတော့ ကျန်းမာရေးပါ။ GYM တွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လောက်ပဲ Service ပေးနိုင်ပေးနိုင် Member တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမှသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ကူညီမှုကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ကတော့ Member တွေရဲ့ လိုအပ်ချက် လိုအင် Member တွေ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ Member တွေရဲ့ Fitness Work က ဘာလဲ? ဒီပေါ်မှ ာမူတည်ပြီးပဲ Service တွေပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က အခု Real Fitness ဖွင့်ခဲ့တဲ့သက်တမ်း7နှစ်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ Real Fitness GYM မှာပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Miss ပွဲတွေ ကာယဗလမောင် ကာယဗလမယ် ဒီလိုပွဲမျိုးတွေ၊ မာရသွန် ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာလည်း Participate အမြဲတမ်းလုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်းကျအောင် အားလုံးကျန်းမာကြံခိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ Real Fitness အနေနဲ့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း တိုင်းပြည်မှာ နေရာဒေသပေါင်းစုံ ကချင်ပြည်နယ် တခြား မန္တလေး နေပြည်တော် ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ အားကစားပွဲတော်တွေမှာလည်း အမြဲတမ်းပါဝင်ကူညီနိုင်အောင် ကာယဗလမောင် အလှမယ် နိုင်ငံတကာပွဲတွေ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် Miss ပွဲ Mister ပွဲတွေမှာ အမြဲတမ်း Support ပေးပါတယ်။ Real Fitness ရဲ့ အဓိကကတော့ GYM ဖွင့်ထားတယ်။ GYM မှာလာဆော့မှ ကျွန်တော်တို့ Member မျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိူး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အားလုံးလဲ Real Fitness ကို လာရောက်ပြီးတော့ Member မဝင်ရင်တောင်မှ တစ်ခေါက်တစ်ခါ လာရောက်လည်ပတ်ပြီးတော့ Real fitness မှာ ဘာတွေ စုံလဲ ဘယ်လိုတွေ Service ပေးလဲ Real Fitness ဘာကြောင့် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်တာလဲ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာလဲ ဒီဟာလေးတွေကို လာရောက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့က Price Priority မဟုတ်ပါဘူ။း Service Priority ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Price တွေအကုန်လုံးက Club တွေအလိုက် Price တွေ မတူကြဘူ။း ကျွန်တော်တို့မှာ နောက်ဆုံး5သောင်းကျော်ကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ Service ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ကိုလည်း လာပြီးတော့ လေ့လာပါ။ လေ့လာလို့ Member ဝင်ချင်တယ်ဆိုလည်း အမြဲတမ်း Real Fitness က ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ yourFitster Website အတွက် ဘာများပြောချင်တာရှိသေးလဲ?
အခုလို လာရောက်ရိုက်ကူးပေးတဲ့ yourFitster အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ Real Fitness ကနေ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။yourFitster အတွက် စကားလက်ဆောင်လေးကတော့ အားကစားကဏ္ဍတွေ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေ ဒီလိုကဏ္ဍမျိုးတွေက လူတွေ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ ဒီလို Website လေးတွေရှိလာတဲ့အတွက် လူတွေကကျန်းမာရေးရာနေရာတွေ အလှပရေးရာနေရာတွေ Fitness Center တွေ GYM တွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရတဲ့အတွက် ဒီလို Website မျိုးတွေအများကြီးရှိသင့်ပါတယ်။ အဲ့တော့ yourFitster လည်း အများကြီးအများကြီး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒုပြူပါတယ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ။